‘मै पनि एमाले’ लाई सेलाउन दिनेछैन् : प्रिया भण्डारी – Nepal24News
‘मै पनि एमाले’ लाई सेलाउन दिनेछैन् : प्रिया भण्डारी
January 31, 2018 by नेपाल २४न्युज
काठमाडौं । गायक बद्री पंगेनीसंग मिलेर एमालेको चुनावी गीत ‘मै पनि एमाले’गाएपछि एकाएक चर्चामा आएकी गायिका हुन प्रिया भण्डारी । सोभन्दा अघि केही गीत गाईसकेकी भएपनि चुनावी गीतले उनको हाइप निकै माथि पुर्यायो । उनको परिचय गायिका मात्र भने होईन् । उनले गीत गाउनुभन्दा मोडलिङ धेरै गरेकी छिन् ।
तिज, लोक, आधुनिक, पप गरि डेढ दर्जन बढी गीतमा स्वर दिएकी तथा त्यो भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरेकी प्रिया अबका दिनमा मोडलिङ भन्दा गायन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने बताउँछिन् । उनिसंग डिसी नेपालले गरेको छोटो कुराकानि ।
दिनहरु कसरी बित्दैछन् ?
अहिले विभिन्न जिल्लामा मेला–महोत्सवहरु भईरहेका छन् । मेला, महोत्सव लगायत विभिन्न साँस्कृतिक कार्यक्रममा बोलाईरहनु भएको हुन्छ । त्यो बाहेक गीत गाउने र म्युजिक भिडियोमै समय दिईरहेकी छु । अध्ययनलाई पनि संगसंगै अगाडि बढाईरहेकी छु ।
तपाईलाई स्रोता/दर्शकले कसरी चिन्ने ? तपाई गायिका कि मोडल ?
म दुबै विधामा रहेर काम गर्दै आईरहेको छु । गायन र मोडलिङ उस्तै–उस्तै विधा भएकोले गायिकाले मोडलिङ गर्दा केही फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन । तर पनि म मोडल भन्दा गायिका नै भनेर चिनिन चाहान्छु । आउँदा दिनमा गायनलाई नै बढी प्राथमिकता दिन्छु ।
हालसम्म कति गीत गाउँनुभयो ? कति गीतमा माडलिङ गर्नुभयो ?
मैलै हालसम्म डेढ दर्जन जति गीतमा स्वर दिएकी छु भने त्यो भन्दा बढी गीतमा मोडलिङ गरेकी छु ।
एमालेको गीत गाएपछि एकाएक चर्चामा आउनुभयो ? कस्तो लाग्दो रहेछ यसरी एकाएक चर्चामा आउँदा ?
एकदमै गर्व लाग्यो नि । यो गीत गाउँनुअघि मलाई कमै स्रोता र दर्शकले चिन्नुहुन्थ्यो । अहिले धेरैले चिन्नुभएको छ । व्यक्ति नचिने पनि मलाई एमालेको ‘मै पनि एमाले…’ गीत गाउने गायिका भनेर चिन्नुहुन्छ । यसमा एकदमै गर्व लाग्छ । निकै खुःसी पनि छु ।
जसरी एकाएक चर्चामा आउनुभयो त्यो चर्चा त्यसैगरी हराउने होकी भन्ने चिन्ता कत्तिको छ ?
चर्चामा आएपछि त्यो चर्चा सेलाउँदै जान्छकी भन्ने चिन्ता त हुन्छ नै । तर मैले दर्शक र स्रोताबाट पाएको मायालाई कम हुन नदिन मेरो तर्फबाट मेहनत गर्दै आएकी छु । आउँदा दिनमा अझ राम्रो काम गर्दै जानेछु । राम्रा गीतहरु स्रोता, दर्शकमाझ ल्याउनेछु ।
मोडलिङ भन्दा गायनमा सक्रिय बन्छु भन्नुभयो ? नेपालमा गायन क्षेत्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
म एकदमै राम्रो देख्छु । पहिला–पहिला त्यति राम्रो छ जस्तो लाग्दैनथ्यो । जब म कार्यक्रमहरुमा व्यस्त बन्दै गए अनि बुझदै गए । राम्रो कलाकारलाई धेरै अवसर छ । अहिले गीतका एल्वम÷सिडी बिक्रि हुँदैन् तर कार्यक्रमहरु बढी मात्रामा हुन थालेका छन् । नाम चलेका गायक/गायिकाहरुलाई अहिले पनि भ्याईनभ्याई छ । आफूसंग क्षमता, निरन्तरको लगाव हुने हो भने मेरो बुझाई र अहिलेसम्मको अनुभवमा गायन क्षेत्रमा टिक्न गाह्रो छैन ।
थोरै प्रसङ्ग बदलौं, राम्री हुनुहुन्छ ? राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, उत्तिकै राम्रो नाँच्नु पनि हुन्छ ? प्रेम प्रस्ताव चाँही कत्तिको आउँछ ?
प्रेम प्रस्ताव त धेरै आउँछन् । मायाँ गर्छु, तिमीलाई नपाए मर्छु भन्ने धेरै हुनुहुन्छ । यस्ता कुरालाई मैले कला क्षेत्रमा पाएको सफलताको रुपमा लिएको छु ।
कसैको प्रेममा हुनुहुन्छ हो ?
छु, (हाहाहा) । म मेरो परिवारको प्रेममा छु । गीत संगितसंगको प्रेममा छु ।
आफ्नो प्रेमी/जिवनसाथी कस्तो होस् भन्ने चाहानुहुन्छ ?
त्यो बारे सोँचेकै छैन । तैपनि, सर्वप्रथम त मलाई माया गर्ने, मेरो पेशालाई बुझ्ने हुनुपर्यो । अगाडी बढनका लागि हौसला र प्रेरणा दिने । अर्को महत्वपूर्ण कुरा बानी व्यवहार राम्रो हुनुपर्यो ।
अन्त्यमा दर्शक/स्रोताका लागि नयाँ सिर्जना के दिँदै हुनुहुन्छ ?
चाँडै नै २ वटा गीत ल्याउँदैछु । बद्री पंगेनी दाई र मेरो स्वरमा एउटा लोकदोहोरी गीत आउँदैछ । जुन आजमात्रै छायांकन भएको छ । अर्को पञ्चेवाजाको गीत पनि चाँडै नै बजारमा ल्याउने तयारीमा छु ।
Prevबल्ल पत्ता लाग्यो मोनलिसाको तस्वीरमा लुकेको रहस्य , थाहा पाएर हैरान हुनुहुनेछ (भिडियो सहित)
Nextतपाईं बिदेशमा हुनुहुन्छ ? उसो भए श्रीमती अरु संग सुतेको कसरी थाहा पाउने ? : जानी राखौ